I-35 YEENTSANA EZIBALASELEYO ZOKUCHEBA IINWELE (ISIKHOKELO SE-2021) - IINWELE ZAMADODA
Eyona Iinwele Zamadoda I-35 Eyona nto ilungileyo yokucheba abantwana
Oomama bahlala bekhangela ezona nwele zilungileyo zomntwana oyinkwenkwe. Kwaye kudala zahamba iintsuku apho onke amakhwenkwe amancinci enwele elicandelo elifanayo, ikama ngaphezulu, okanye i-shaggy top. Kule mihla, iinwele zakho zamakhwenkwe ezintsana zakho zinokufana nefashoni njengeyona ndlela ipholileyo yokucheba iinwele emadodeni. Ngapha koko, singaphikisa ukuba uluhlu lwethu lweentlobo zokucheba iinwele ezithandekayo zikhangeleka ngcono nakubantwana abancinci nakumakhwenkwe amancinci kuba abantwana bayathandeka ngokusika ngokufanelekileyo.
Nokuba ukhangela iinwele ezimfutshane, eziphakathi okanye ezinde, uyakufumana uninzi lweenwele ezothusayo zamakhwenkwe eziza kuthwala indoda yakho encinci ukusuka kumntwana omncinci ukuya kwi-1 okanye 2 ubudala nangaphezulu.
Ukusuka kwi-faux hawk ukudibanisa ngaphezulu, ukubuyela umva, ukuphela kunye nokuhamba ngaphantsi, nazi izinto esizithandayo iinwele zamakhwenkwe amancinci kunye nazo zonke iinguqulelo ezahlukeneyo nganye. Siqinisekile ukuba oku kusikwa kwesitayile kunye nokuhle kuya kubeka uncumo ebusweni bakho kwaye mhlawumbi nokunceda umntwana wakho oyinkwenkwe abonise ubuntu bakhe obukhulayo.
1Izitayile ezithandekayo zaBantwana abaNtsana
MbiniUnyaka Omdala Omncinci Wokucheba Iinwele
3Unyaka Omdala Omncinci Wenwele
4Iifutshane zeenwele zabafana
5Ubude obuPhakathi bamaKhwenkwe aSebenzi ngeeNwele
6Umfana omncinci weenwele ezinde
9Icandelo leenwele ezitshiziweyo
Shumi elinanyeIzitayile zeSpiky
12Izinwele eziKhuselweyo eziBuyile
13Izitayile zeenwele eziQhelekileyo zaMakhwenkwe aBantwana
Izitayile ezithandekayo zaBantwana abaNtsana
Izitayile zeenwele zamakhwenkwe zinokuba phakathi kokulula kuyilo, olucocekileyo ukuya kumdaka, olukhazimlayo ukuya kumbala okroliweyo, okanye eklasikhi yanamhlanje Ukuthambisa iinwele zonyana wakho kunokuba ngumceli mngeni ukuba awazi ngazo zonke iindlela ezahlukeneyo kunye nezinto onokukhetha kuzo.
Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba iinwele zamva nje bezikho malunga nezendalo, iinwele ezilungisiweyo. Ukuhamba ngokufutshane kumacala ngeenwele eziphakathi ukuya ezinde ngaphezulu kunika ukhetho oluninzi lweenwele.
Apha ngezantsi, siza kugqamisa ezona zisikiweyo kunye nezitayile zamakhwenkwe amancinci kunye nokubonelela ngemifanekiso. Jonga le mizekelo ihambelanayo ukuze ufumanise ukuba zeziphi iintlobo zeenwele eziza kujongeka zilungele umntwana wakho!
Unyaka Omdala Omncinci Wokucheba Iinwele
Ezona zinwele zilungileyo zenkwenkwana enonyaka ubudala azidingi kunqunyulwa konke konke. Ngokwenyani, singaphikisa ukuba ukushiya iinwele zenkwenkwana yakho encinci kwaye inde ngesinqe seengcebiso yindlela elungileyo yokwenza. Emva kwayo yonke loo nto, njengokuba ekhula, ezo tresi ezintle zinokuze zingathandeki. Kude kube lelo xesha, sebenzisa ukukhanya kweenwele kwimveliso yesitayile sokukhululeka, sokulungiswa kwentloko.
amadoda iinwele ezimfutshane ezineendevu
Ukuba ufuna iinwele ezimfutshane zomncinci wakho, zama amacala athambileyo ubuncinci i-intshi ezi-3 zeenwele ngaphezulu. Ngeendlela zokuqala zokucheba iinwele, cinga ngeenwele ezitshayisiweyo, umpopu omdaka, okanye ikama yodidi olungaphezulu.
Unyaka Omdala Omncinci Wenwele
Eyona minyaka mibini mihle yokucheba iinwele inika ukhetho olungaphezulu kwesitayile. Ngenxa yokuba amakhwenkwe amancinci enobuntu obuninzi kwi-2, afanelwe ukusikwa kunye nezimbo ezihambelana noko. Ezona zinwele zithandwayo kulo nyaka zibandakanya i-faux hawk, mohawk, icala lecala, i-quiff, kunye neenwele ze-spiky.
I-mohawk yesiko enamacala achetyiweyo inokugqibelela kwabanye abantwana, kodwa abanye abazali banokuyithatha ngokungathandekiyo. Umhlaba ophakathi owonwabileyo unokufunyanwa kwi-faux hawk. Ikhatshwa yi- ukubuna okanye ngaphantsi ukwenza umahluko emacaleni nasemqolo, i-faux hawk isitayile esithandwayo kunye ne-barbershop oyithandayo.
Olunye uluvo olukhulu lokucheba amakhwenkwe amancinci luphela oluphantsi emacaleni kwaye mfutshane ukuya kubude obude obuphakathi phezulu. Isiphelo esisezantsi siyalondoloza kodwa sibonelela ngokungafaniyo okuyimfuneko okutsala amehlo kwizinwele ezingasentla. Ubude obungaphezulu bunikezela ngokuguquguquka kwisitayile esilula kunye nesilula okanye sokuyila kunye nefashoni. Umzekelo, ukushiya iinwele ezingqindilili zenkwenkwe yakho zibunjiwe kwaye zingcolile inokuba yimbonakalo entsha.
Iifutshane zeenwele zabafana
Izinwele ezimfutshane ziya kuhlala zihlala kwisitayile. Oku taper fade iinwele idityaniswe nemilo eyenza ucoceko, imigca ecekeceke ecaleni komgca weenwele. Kwaye ngenxa yokuba uyilo lweenwele kunye neenxalenye ezinzima ziye zahamba kulo nyaka, le iinwele ze-spiky zenziwe zahluka ngakumbi.
Ukuba ukhetha ukunqunyulwa kweenwele ezisezantsi, oku kungaphantsi kwesiphelo somngxunya kunokuba sisisombululo. I-undercut isika amacala kwaye ibuyise bonke ubude obunye, kwaye iinwele ezimfutshane ezifakwe phezulu zibrashiwe kwicala elingaphambili. Oku kudala i-angular fringe ethi, ngelixa ujonge kude-ibhalansi, intle intle.
Ubude obuPhakathi bamaKhwenkwe aSebenzi ngeeNwele
Njengenxalenye yamacala amafutshane, ubude beenwele eziphezulu zamakhwenkwe kunye namadoda, iinwele ezinde eziphakathi zibukeka zithandeka kwaye ziyindalo. Ukuvumela iinwele zenkwenkwana yakho ikhule kuvula amathuba angenamda. Kuboniswe ngentla, uyakufumana i-taper emfutshane yeklasikhi kumacala asikwe ngesikere endaweni yeziqhiki. Ngaphezulu, isitayile esinexesha elide sihambisa umthamo kunye nentshukumo.
Ubuhle beenwele ezinde zamakhwenkwe zezinwele ezininzi onokuziphumelela. Endaweni yokuhlambalaza, ukuhamba ngokukhululeka kwe-hawk, abantwana banokugcina iinwele zabo phantsi kwaye bohlule kwelinye icala.
Umfana omncinci weenwele ezinde
Kudala-dala, kwakuyinkolelo eqhelekileyo ukuba iinwele ezinde kufuneka zigcinelwe amantombazana amancinci. Namhlanje, amakhwenkwe angaphezulu kunangaphambili ayadlala iinwele ezinde. Ukuba umfana wakho omncinci uyamthanda iinwele zakhe eziluhlaza, ezikhazimlayo kwaye awukulungelanga ukwahlukana nayo, zininzi iindlela ezintle zamakhwenkwe aneenwele ezinde.
Ukuba umntwana wakho oyinkwenkwe uneenwele ezintle, jonga isitayile kunye nenxalenye esecaleni kunye namanqanaba amade okuba uncede unike abanye ukuhamba ngelixa uzigcina ulawulwa.
Kwelinye icala, ukuba umfana wakho omncinci unayo iinwele ezinekhelizi , maleko kwakhona unokuba ngumhlobo wakho. Ngapha koko, iinwele ezinde zolusu oluyinkwenkwe olunokukhulisa ezo curls zithandekayo.
Abantwana baphela iinwele sebenza kakuhle nazo zonke iintlobo zokusika kunye nezitayile. Ukuphela kukucheba iinwele okuqala ngaphandle ngaphezulu kwaye ngokuthe ngcembe kuye kufutshane njengoko kusihla kuye emacaleni, ngasemva nasentanyeni. Ngamanye amaxesha, ungacela i-barber yenkwenkwana yakho ukuba iphele ulusu, kwimeko apho icandelo elingezantsi linokubhaza okanye lichebe ngokupheleleyo.
Ukufikelela kweenwele ezinde ngaphezulu, sicebisa ukuba sifutshane ukuya kubude obuphakathi. Ungayigcina imalunga ne-intshi kwaye ujonge ngaphambili kunye nezinye ipomade , okanye uyigcine ixesha elide kwaye uyiphinde ubuye nentwana yekhrimu.
Ezi zitayile zilungele amakhwenkwe amancinci kuba azinangxabano, kulula ukuba nesitayile, kwaye kulula ukuzilungisa ngoncedo lweeveki ezimbalwa. I-taper fade haircut ijongeka ilungile nazo zonke iintlobo zeenwele, ke nokuba inkwenkwana yakho inenwele ezithe nkqo okanye iinwele ezixineneyo nezityebileyo, ukusika okuphelileyo kunokuba yinto elungileyo kwaye kumnandi.
Bonisa inkwenkwana encinci umfanekiso we-punk rocker nge-mohawk enkulu, enemibala, kwaye kukho ithuba elihle lokuba uya kufuna loo ndlela - ubuncinci kwithuba elithile. Kumnandi ukwenza ii-mohawks ngexesha lokuhlamba ngokuqokelela ishampu kunye nokufaka i-spikes ngaphezulu kwentloko yakho encinci, kodwa ungathini ukuba unokuphinda wenze oko kujongeka mihla le, kuphela ngendlela ebuthathaka? I-faux hawk yeyona ndlela ifanelekileyo yokufezekisa oku, kwaye inokuba nesibindi ngendlela othanda ngayo.
Iifaksi zeFaux zinokudityaniswa, kodwa zinokudalwa zivela kwincinci yakho eqhelekileyo iinwele zamakhwenkwe ngesuntswana lepomade okanye ijeli.
Ukwenza isitayile sefeksi yomntwana, qala ngeenwele ezimanzi kancinci kwaye emva koko tsala iinwele ngaphezulu kwentloko yakhe uye embindini, ukhombe ngqo phezulu. Imveliso yesitayile esiphakathi ukuya phezulu iyafuneka ukugcina iinwele zisendaweni yonke.
Icandelo leenwele ezitshiziweyo
Ikwabizwa ngokuba licala elisecaleni okanye ikama ngaphezulu, ukutshayela kwicala lelinye lezona zisiko zidumileyo phakathi kweshumi elinesibini kunye amakhwenkwe akwishumi elivisayo , kwaye kwiimeko ezininzi, ifanelekile nje kubantwana abaselula kunye namakhwenkwe amancinci.
Njengokuphela, izitayile zokucheba iinwele eziguqulweyo zibhetyebhetye ngendlela emangalisayo kwaye zikuvumela ukuba ugcine umphezulu ube mfutshane okanye umde ngendlela othanda ngayo. Konke okufunekayo yizinwele ezintle ezithi zihlanganyele kwelinye icala okanye kwelinye kwaye zitshayele entloko.
Kwezinye iimeko, inokuba lixesha elingaphambili lokutshayela olithanda kakhulu; kwabanye, unokufuna ukugcina iinwele zide kwaye uzinike nefuthe.
inxalenye yecala ukuchetywa kwamadoda
Kwaye ngokugqibezela okucocekileyo kancinci, kunokwenzeka ukuba ubonise isitayile esisecaleni. Icandelo lala maxesha elinokuphela emacaleni libonelela ngobuhle, iinwele ezifanelekileyo ezifanelekileyo kubafana bayo yonke iminyaka.
Ukuba iinwele zakho zomntwana oyinkwenkwe zibonakala zikhula ngokukhawuleza okukhulu kwaye ufuna indlela ekhawulezayo, elula yokumnceda abonakale enesitayile ngaphambi kokushiya inkathalelo yosuku okanye isikolo kusasa, uhlaziyo lolo. Oku kubandakanya ukutsala iinwele zakhe ezinde ziye kwi-bun, i-ponytail, okanye i-braid ukuyigcina isendleleni yakhe imini yonke ngaphandle kwesitayile sokubingelela.
Elona candelo lililo kukuba awuzukubaleka uye kwi-stylist kube kanye ngenyanga ukugcina ukujonga kwakhe; ukuba uneeveki okanye ezimbini emva kwexesha unetrimu, uhlaziyo luya kuyifihla.
I-classic man bun inokuphinda ibuye ibe yintsana kwaye iyathandeka kangangokuba awuyi kuba nakho ukuyeka. Unokukhetha into eyahlukileyo ngakumbi, njengehashe eliphakamileyo entlokweni yakhe enenxalenye egqibeleleyo, engaphantsi, kunye nokuhlela.
Ngokufanayo, ii-braids kunye iikona bahlala behle kubantwana; Kukho amakhulu ezitayile onokukhetha kuzo ukuze zilungele amakhwenkwe amancinci ayo yonke iminyaka kunye nobude beenwele.
Ukuba kukho enye iinwele umntwana wakho oyinkwenkwe uya kuhlala ethanda, zi-spikes. Emva kwayo yonke loo nto, kuyahlekisa kubafana abancinci ukuba babukele iinwele zabo zime nkqo kwiintloko zabo, ngakumbi emva kweenyanga bezama ukuzilungisa ezo nkomo ziyinkathazo.
Izitayile zeSpiky zinokukunceda ukuthintela umzabalazo oqhubekayo kunye ne-pomade eyomeleleyo okanye ijeli yeenwele. Elona candelo lililo kukuba unokufezekisa into ngobuhlanya ngobuhle nokuba iinwele zonyana wakho zimbalwa.
Ezi nwele zamakhwenkwe ziyalufuna ngaphandle kwemveliso yesitayile kunye nekama. Faka nje isixa esincinci semveliso kwiinwele ezifumileyo kwaye uzikame ngokuthe ngqo phezulu, emva koko mayeke. Isiphumo siyi-spiky yokwenza eya kukuhlekisa, mfo omncinci, kunye nabahlobo bakhe kunye nosapho.
iplanethi intsingiselo yokuvumisa ngeenkwenkwezi
Ukuba uzama ukubeka yonke inkomo yenkomo kwindawo yayo kusasa inxibe kuwe (kunye nonyana wakho) umonde, zama i-hair back back. Ukuxubha iinwele umva kulula ngokwaneleyo - sebenzisa nje i-pomade okanye i-wax enomntwana kwaye uzidibanise zonke iinwele zenkwenkwe yakho ebusweni bakhe. Logama ukhetha imveliso yokuyila esekwe emanzini ebonelela ubuncinci bokubamba, iya kuhlala apho imini yonke, kwaye ayizukuba yintlungu ukuhlamba ebusuku, nokuba.
Ngeendlela ezininzi ezahlukeneyo zokutshintsha isitayile seenwele emva, ukufezekisa njani ukubonakala kuxhomekeke kuwe. Umzekelo, ukubuyela umva kwe-undercut yeyona nto ixhaphakileyo kunye nokungafani.
Nangona kunjalo, abanye oomama banokukhetha ukuphela emacaleni ngebrashi ejongeke ngakumbi kwindalo ukubuyisela ivolumu kunye nentshukumo. Sebenzisa ukukhanya okuphantsi okanye imveliso yeenwele ze-matte, dibanisa iinwele emva, emva koko usebenze kwiinkcukacha ezintle ngeminwe yakho.
Izitayile zeenwele eziQhelekileyo zaMakhwenkwe aBantwana
Uninzi lwabantu lunomona ngeenwele ezintle zomntwana oyinkwenkwe. Ezo curls zihlambulukileyo ziyakhazimla, zi-bouncy, kwaye ziyathandeka. Nangona kunokuba kukulingwa ukugcina iinwele zomntu wakho omncinci zinqunyulwe ukunakekelwa ngokulula, ukuzilungisa kunye nesitayile, inyani kukuba ukukhulisa ezo curls ngaphandle ngamanye amaxesha zezona zilungileyo.
Amacala amafutshane, iinwele ezinde eziphezulu zinokujonga amehlo kwizinwele ezintle zenkwenkwe yakho. Unokuvumela ii-curls zakhe ezithandekayo ukuba ziwele phantsi ebunzini lakhe kwii-bangs ezintle. Okokugqibela, ukuba iinwele zakhe zilungile ngandlel 'ithile, kungangcono ukuba nesitayile kuludwe olude kwaye umyeke abe nengqondo eyeyakhe.
tattoos esifubeni amadoda
iindlela zokucheba iinwele zabantwana